Uzovela enkantolo owesifazane ozame ukubulala usana lwakhe olusanda kuzalwa | News24
Johannesburg - Owesifazane oneminyaka engu-21 ubudala kulindeleke avele eNkantolo kaMantshi eLehurutshe esifundazweni iNorth West ngoMsombuluko ngecala lokuzama ukubulala usana lwakhe olusanda kuzalwa.
Owesifazane uthweswe icala ngoMgqibelo ngezinsolo zokuzama ukubulala usana lomfana, kusho amaphoyisa aseNorth West.
“Ngokwemininingwane esiyitholile okwamanje, kubukeka sengathi owesifazane, umndeni wakhe obungazi ukuthi ukhulelwe, uzibelethise yena, wabe eselufaka emgodini lwendlu yangasese usana ngoLwesine eDinokana‚ eLehurutshe.
“Usana lutholwe ngumzala wakhe lona wesifazane obone igazi phansi endlini yangasese. Esashaqekile, uzwe ukukhala kwengane phakathi emgodini, wabiza udadewabo kanye nomakhelwane,” kusho amaphoyisa.
OLUNYE UDABA: Kuzohlonzwa izisumbu zabashona engozini yesitimela neloli
Amaphoyisa kanye nabe-Emergency Medical and Rescue Services (EMRS) babizelwe endaweni yesigameko, lwakhishwa usana emgodini.
Usana kanye nonina bayiswe esibhedlela ukuze bezohlolwa.
“Ngemuva kokugadwa ngamaphoyisa kusukela ngoLwesine, ukhishiwe esibhedlela ngoMgqibelo [waboshwa],” kusho amaphoyisa.